FestPac 2020: Ny zava-kanto sy ny kolontsaina tsy naseho mihitsy tany Hawaii niaraka tamin'i Guam nandray andraikitra lehibe
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » FestPac 2020: Ny zava-kanto sy ny kolontsaina tsy naseho mihitsy tany Hawaii niaraka tamin'i Guam nandray andraikitra lehibe
Mpizahatany maro mitsidika an'i Hawaii ny 10-21 Jona no tsy mahalala, fa ny zava-kanto lehibe indrindra sy ny festival kolontsaina dia tanterahina ao amin'ny State of US izay mampivondrona ny firenena rehetra any Pasifika. Hetsika tsy te halahelo ireo mpitsidika.
Ny lohahevitry ny FESTPAC-Hawai'i 2020, "E kū i ka hoe uli" (fihazona ny familiana), dia avy amin'ny tononkira ara-paminaniana izay mampitandrina ireo fiovana mikorontana amin'ny faravodilanitra. Androany, miantso ny vazimba teratany ny tononkira mba hamerina ny zony hitarika ny lalantsika manokana, ankehitriny sy amin'ny ho avy.
Ny Festival of Pacific Arts & Culture (FESTPAC) no fankalazana lehibe indrindra eran-tanin'ireo nosy Pasifika, mpanakanto mpanakanto, mpahay kolontsaina, manam-pahaizana ary tompon'andraikitra avy amin'ny firenena mpikambana ao amin'ny Community Pacific (SPC). Ny FESTPAC dia tanterahina isaky ny efa-taona any amin'ny firenena Pasifika hafa, ary i Hawai'i dia omena voninahitra hampiantrano ity fampirantiana zavakanto sy kolontsaina Oceanika ity manomboka ny 10 - 21 Jona 2020.
FESTPAC-Hawai'i 2020 dia hanasongadina fampisehoana mivantana, atrikasa ara-kolontsaina, fampisehoana an-tanana, sarimihetsika, fitantarana ary maro hafa, maneho ny fahasamihafan'ny zavakanto nentim-paharazana sy ankehitriny sy kolontsaina manerana an'i Oceania. Ity hetsika ity dia hanasongadinana ihany koa ireo olana maika atrehin'ny mponina ao amin'ny Nosy Pasifika - manomboka amin'ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina sy ny fahafatesan'ny haran-dranomasina ka hatrany amin'ny fitomboan'ny tsy fitoviana ara-tsosialy - ho fomba hanazavana ny lalantsika mankany amin'ny ho avy.
Nalefa tamin'ny 1972 ny Kaomisiona Pasifika atsimo (Community Pacific ankehitriny), ny festival dia mikasa ny hampitsahatra ny fikaohin'ny fanao nentim-paharazana amin'ny alàlan'ny fifanakalozana kolontsaina mitohy sy hanamafisana ny fifandraisana misy eo amin'ny firenena Oceania.
Firenena 27 mpikambana ao amin'ny FESTPAC dia: Samoa Amerikanina, Aotearoa, Aostralia, Nosy Cook, Etazonia Federasiona Mikronesia, Fiji, Polinezia frantsay, Guam, Hawai'i, Kiribati, Nosy Marshall, Nauru, New Caledonia, Niue, Norfolk, Nosy Mariana Avaratra, Palau, Papua New Guinea, Pitcairn, Rapa Nui, Samoa, Nosy Solomon, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, ary Wallis ary Futuna. Nanasa ireo vazimba teratany ao Taiwan koa i Hawaii hankany FESTPAC-Hawaiʻi 2020.
Nanaiky tamin'ny fomba ofisialy ny fikasany i Guam mba handray anjara amin'ny Fetiben'ny Zavakanto Pasifika na FestPac 2020, hetsika ara-kolontsaina lehibe indrindra any amin'ny faritra izay mitranga isaky ny efa-taona. FestPac 2020 dia hatao any Hawaii ny 10 ka hatramin'ny 21 Jona.
Guam dia nampiantrano ny hetsika tamin'ny 22 Mey ka hatramin'ny 4 Jona 2016, nandany $ 8.5 tapitrisa farafahakeliny ho amin'izany ary nanintona mpanao asa-tanana sy mpitsidika an'arivony.
Ny Sen. Kelly Marsh, filohan'ny komity mpanao lalàna momba ny vakoka sy ny zavakanto dia nilaza fa ny fandraisana anjara amin'ny FestPac 2020 dia fotoana lehibe hampiroboroboana an'i Guam ho toerana fizahan-tany ho an'ny tsenan'ny fizahan-tany iraisam-pirenena.
“Amin'ny maha governemanta antsika dia tsy maintsy manao ny anjarantsika isika mba hahazoana antoka fa mahomby ny Fetiben'ny Zavakanto Pasifika faha-13 ao Hawai'i; hahazoana antoka fa manana ny haja mendrika ny kolontsaina CHamoru i Guam; hanohy hanohana izay manamafy ny marika Guam sy ireo mpandraharaha eto an-toerana; ary hiantohana ny vondrom-piarahamonina misy antsika, ary indrindra ny vahoaka CHamoru ao Guam, hanana fahaizana manohy mampiseho, mitazona ary mamelombelona ny kolontsain'izy ireo, ”hoy i Marsh tao anaty fanambarana.
Afaka herinandro vitsivitsy dia hisy ny antso ho an'ireo mpanao asa tanana monina izay liana amin'ny fitantanana ny iray amin'ireo komity kely efatra izay hanara-maso ny karazana kanto izay natoron'i Hawaii, hoy izy.
Nanambara i Marsh fa izy sy ny filohan'ny Departemantan'ny raharaham-bahiny CHamoru Ann Marie Arceo, lehiben'ny delegasiona festival Guam, dia nanolotra ny fomba ofisialy fandraisana anjara amin'ny nosy.
"Ny fandraisanay anjara amin'ny FestPac dia misy dikany lehibe ho an'ny vondrom-piarahamoninay," hoy izy.
Nilaza ny loholona fa ny rafozam-baviny efa maty, ny Speaker teo aloha Carlos P. Taitano, dia nanamarika fa ny fandraisan'anjaran'i Guam dia "hery manosika iray amin'ny famelomana indray ny kolontsaina CHamoru ary ny fanehoana imasom-bahoaka."
"Tena sambatra izahay manana ny mpiasa ao amin'ny Council of the Arts and Humanities Agency izay mahalala tsara ny lafiny anatiny sy fiomanana amin'ny fandraisana anjara amin'ny FestPac satria efa am-polony taona maro izay no nanaovan'izy ireo izany," hoy izy.
Ny fandraisan'anjaran'i Guam dia zava-dehibe ihany koa amin'ny famelomana indray ireo indostrian'ny kolontsaina izay ampahany lehibe amin'ny marika Guam ho an'ny fizahan-tany, hoy i Marsh.
"Efa ela ny mpizahatany no nanambara fa ny te hahita sy hiaina ny kolontsaina CHamoru no antony lehibe indrindra hisafidianana ny ho tonga any Guam," hoy ny loholona.
Ny fandraisana anjara amin'ny FestPac dia manome toerana iray hivarotana vokatra eto an-toerana kanefa mbola manome izany ihany koa ny karazana vokatra natolotry ny Guam ary koa ny fampisehoana ireo mpanao asa tanana eo an-toerana ny kanto ara-kolontsain'ireo nosy Pasifika namany, hoy izy.
Ao amin'ny 2016 eTurboNews tatitra avy any Guam: